I-PSG izonikeza uMbappe ithuba lokubhaxabula i-Barcelona | Scrolla Izindaba
I-PSG izonikeza uMbappe ithuba lokubhaxabula i-Barcelona
Umdlali waphambili we-Paris Saint-Germain uKylian Mbappe nguyena muntu ongeke anikeze abavikeli be-Barcelona ubuthongo ngaphambi kokuhlangana kabili ngoLwesithathu ku-UEFA Champions League last 16.
Kepha umbuzo omkhulu uthi: ingabe i-Barcelona ingaphinde yenze eyakwenza ngowezi-2017 kwi-La Remontanda yabo edumile (“i-The backback”)?
La maqembu omabili ase-Europe azobhekana futhi emzuliswaneni wesibili e-Parc des Princes yase-Paris ngo-10 ebusuku. I-PSG ihola phambili ngamagoli amane kwelilodwa emlenzeni wokuqala e-Barcelona mhla ziyi-16 kuNhlolanja.
Ngaphambi kwenyanga edlule, la maqembu omabili agcina ukuhlangana ngowezi-2017. I-Barca yehluleka ukunqoba ngamagoli amane emlenzeni wesibili womdlalo wabo we-16 we-Champions League ukunqoba ngamagoli ayisithupha kwamahlanu sekuhlanganiswe yonke imidlalo. Lokhu kube ukubuya okukhulu kunakho konke emlandweni womncintiswano, owaziwa nge-La Remontanda (“Ukubuya”).
Abadlali abafana noMbappe, owayedlalela i-Monaco ngaleso sikhathi, bangathanda ukuqinisekisa ukuthi lokho akwenzeki futhi. Lo mdlali oneminyaka engama-22 ubeyiphupho elibi kubadlali basemuva be-Barca e-Camp Nou, ikakhulukazi kuGerrard Pique onamava, obengenazimpendulo zokuthi angamuvimba kanjani lo mdlali onejubane.
Ngalobo busuku uMbappe washaya amagoli amathathu futhi waba ngumdlali ovelele. Wabuye wahamba nebhola lomdlalo.
Ngenkathi kwenziwa lo mjaho ngoZibandlela izazi zebhola lezinyawo zaqhakambisa ukungqubuzana phakathi kukaLionel Messi noNeymar. Ngeshwa lo mdlali wase-Brazil walimala kusasele isonto ngaphambi komlenze wokuqala waphuthelwa ukubuyela e-Camp Nou kowokuqala selokhu ahamba ngowezi-2018.
Lo mdlali oneminyaka engama-29 ubuyele ekuzilolongeni kancane neqembu le-PSG ngeviki eledlule. Iqembu kodwa likuqinisekisile ukuthi uNeymar uzoqhubeka nomsebenzi wakhe wokuzivocavoca ngayedwana, ngakho-ke uzolahlekelwa yiqembu lakhe langaphambili futhi.
Omunye umdlalo ozodlalelwa eNgilandi uzoba phakathi kwe-Liverpool ezokwamukela iqembu lase-German i-RB Leipzig e-Anfield ngo-10 ebusuku. Iqembu lasekhaya lihola kahle ngamagoli amabili eqandeni abawathola emdlalweni wabo wase-Germany ngenyanga edlule.
AmaJalimane, nokho, nakanjani azowathanda amathuba abo ngeLiverpool yokungaqhubi kahle ekhaya kule sizini.
Umthombo wesithombe: @MadridFC